Hollywood Vanity Factory - China Hollywood Vanity Vagadziri, Vatengesi
Simbisa nzvimbo yako isina maturo neyekunaka Natalie! Inoratidzira ekuratidzira masherufu iwe ekuratidza ako akanakisa zvisina maturo zvishongedzo. Natalie akagadzirwa nemadhirowa mahombe maviri akasimbiswa neImpressions Vanity's Crystal Lux Drawer Knobs. Inouya ne anti-tipping bracket iyo inogona kuiswa kuseri kwekuchengeteka kwako. Zvikwiriso uye mapurasitiki madziro madhiri anosanganisirwa ekumisikidza!
Vanity Storage Storage Units yeiyo chic inotarisa kune yako isina maturo set-up! Yakashongedzwa kana iwe uchida kuve nayo seyakamira yega uye yakasimba kutsigira yako Makeup Vanity Tabletop. Inosanganisira madhirowa akapfavirira-akajeka ayo anojekeswa needu echriststal lux dhirowa mapfundo.
5 dhirowa Hollywood Vanity Mirror ine Mabumba uye Tafura Yakagadzika Nhema Kuva nekutarisana nezvinetso zvemuchadenga mufurati rako diki? Wati wamboda here kona yako wega? Iwe unoda here imwe nzvimbo yekuchengetera zvako zvekuzora, zvinonhuwira
8 dhirowa Hollywood Vanity Mirror ine Mabumba uye Desk Seti Nhema Iyi Hollywood Glam Set ine zvese zvaunoda uye nezvimwe.
Yakagadzirwa nemaoko, girazi redu rinotengesa zvakanyanya rine chic base yekushongedza tafura yako isina maturo, kana kuigadzirisa kumadziro ako nekushanda zvinotaridzika pese paunopinda mukamuri.
Chirevo chekupedzisira mukusaremekedza kusina maturo, chinosanganisira yedu yakasarudzika pateni yeHollywood Frame yakasarudzika, yakanyanya chic, uye dhizaini yazvino inoburitsa mhando nyowani yeHollywood glamour uye yakapusa kugadzirwa iyo yaita vasingaverengeke vanodikitira vanoda, mapros uye akanaka mabloggi kuwira murudo. Joinha zviuru zvevaridzi vanofara uye rega kupenya kwako kwemazuva ese!